किन फ्रान्सेली पुरुष त हब पृष्ठ
एक गिलास रक्सी को पूल द्वारा यस दिउँसो बीचमा ब्ययफ्रेंडस कुरा पुरुष -अरू के गर्न सक्छ, हामी बारेमा कुरा गर्न । पछि सबै, हामी फ्रान्स मा — जब यो अन्तमा मारा मलाई किन हो फ्रान्सेली पुरुष त अकाट्य छ । मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महिला होला भनेर मलाई सहमत फ्रान्सेली पुरुष एक बनाउँछ भन्ने उनलाई. तिनीहरूले हुन सक्छ सबैभन्दा सुन्दर व्यक्तिहरूलाई, तर तिनीहरूले आकर्षक र प्यारो छ । तर के बनाउँछ फ्रान्सेली पुरुष त विभिन्न अन्य यूरोप वा अमेरिका. यहाँ तपाईं जवाफ पाउनुहुनेछ । जन्म संग पेरिस मा निलो आँखा, छ, एक सितारा को युरोपेली सिनेमा । प्रसिद्ध लागि आफ्नो कठिन मान्छे भूमिकाहरूको र उदार विकल्प, पनि ज्ञात छ भएकोमा मोनिका श्रीमान् हुनत, तिनीहरूले अलग मा को वर्ष पछि सँगै भइरहेको छ । उहाँले ज्ञात छ विश्वव्यापी माध्यम आफ्नो फिल्म प्रदर्शन मा महासागर गर्नुपर्छ बाह्र र महासागर गर्नुपर्छ तेह्र, साथै रूपमा कालो हंस. मा मात्र वर्ष पुरानो, पहिले नै छ, र अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता अभिनेता धन्यवाद भूमिका मा को मूल दुष्ट जहाँ उहाँले खेल्छ अंग्रेजी मा. उहाँले पनि ज्ञात छ अन्तर्राष्ट्रीय धन्यवाद गर्न आफ्नो भूमिका मा सेन्ट मा । उहाँले पनि»अनुहार»को च्यानल गरेको अत्तर. मलाई थाहा छ, यो वास्तवमा एक अजीब लागि विकल्प धेरै छ । म छु छैन अन्धा, र म विचार छैन जेरार्ड रूपमा एक सौन्दर्य प्रतिमा, मलाई थाहा छ कि उहाँ कुनै हालतमा एक सुन्दर नायक भने तर तपाईं कहिल्यै देखेको खेल उहाँलाई बरगेराक् (फ्रान्सेली मूल संस्करण) तपाईं किन बुझ्न त्यहाँ थियो एक राम्रो विकल्प चरित्र लागि र किन यति धेरै महिलाहरु छन् बारेमा पागल उहाँलाई । बस सुन्न र भिडियो को कुरा आफ्नो प्रिय. उनको जस्तै तपाईं महसुस गर्नेछन् आफ्नो घुँडा जा जस्तै जेली मा को र आफ्नो सुन्दर शब्दहरू । एउटा प्रतिमा फ्रान्सेली छायांकन, केही अविश्वसनीय सुन्दर फ्रान्सेली अभिनेता । पनि अब वृद्ध उहाँले अझै हट, र तपाईं देख्न सक्छौं, उहाँलाई मा आफ्नो नवीनतम फिलिम, जहाँ उहाँले खेल्छ जुलियस. हुनत जन्म स्विट्जरल्याण्ड मा, पेरेस मानिन्छ छ एक फ्रान्सेली अभिनेता छ । उहाँले उद्धृत गरिएको छ भन्दै म हराएको थियो संग कुनै देश र फ्रान्स अपनाए मलाई । भिन्सेन्ट पेरेस छ एक, बिचित्रको-हेर बारेमा उहाँलाई भने र तपाईं उहाँलाई सुन्न फ्रान्सेली मा, तपाईं सक्छ बस ढल्छ जस्तै एक बरफ क्रीम.
जस्तै समीक्षा: यो एक फिलिम नाटकीय परिवार टकराव, मृत्यु-ओछ्यानमा दृष्य, पुस्तकहरू, सेक्स, छुटकारा र विशेषज्ञ दृश्यहरु । हरेक क्षण छ, हरेक अभिनेता दिन्छ आफ्नो सबै. विशेष राम्रो हो भिन्सेन्ट पेरेस रूपमा गरेको तातो-राखदै प्रिय, ला गरिएको छ । ‘एम वा मत्ती, मेरो मनपर्ने फ्रान्सेली गायक । उहाँले बस सिद्ध को भूमिका मा रबिन हुड मा फ्रान्सेली संगीत कमेडी»रबिन». उहाँले पनि ज्ञात छ लागि आफ्नो ठूलो हृदय रूपमा, उहाँले छ एक ठूलो समर्थक दान को कारण विशेष एड्स र छोराछोरीलाई दान.
हब पृष्ठ इंक
र सम्बन्धित मालिकको. अन्य उत्पादन र कम्पनी को नाम देखाइएको हुन सक्छ ट्रेडमार्क आफ्नो सम्बन्धित मालिकको । हब पृष्ठ एक दर्ता सेवा मार्क को हब पृष्ठ, इंक. हब पृष्ठ र (लेखक) कमाउन सक्छ राजस्व मा यस पृष्ठ मा आधारित संबद्ध सम्बन्ध र विज्ञापन संग साझेदार सहित अमेजन, गुगल, र अरूलाई. एक प्रयोगकर्ता को रूप मा, आफ्नो अनुमोदन मा आवश्यक छ केही कुराहरू छन् । प्रदान गर्न एक राम्रो वेबसाइट, अनुभव हब पृष्ठ कुकीहरू प्रयोग (र अन्य समान प्रविधिहरू) र सङ्कलन, प्रक्रिया, र शेयर व्यक्तिगत डाटा.
छनौट कृपया जो क्षेत्र को हाम्रो सेवा तपाईं सहमति हाम्रो त गरिरहेको छ ।
← निःशुल्क अनलाइन डेटिङ बिना दर्ता
कसरी च्याट गर्न एक केटी संग अनलाइन: कदम →